2009 – Year – Alpha Premium
Goemon (2009) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ "Goemon" လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုအယ်မွန်ရဲ့ဆရာ နိုဘူနာဂါဟာ နောက်လိုက်တွေရဲ့သစ္စာဖောက်လုပ်ကြံချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ ဂိုအယ်မွန်ဟာလည်း ဆရာလုပ်ကြံခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဆင်းရဲသားတွေကိုကူညီပေးလေ့ရှိတဲ့ ကျွမ်းကျင်အဆင့်သူခိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ လွတ်လပ်စွာနဲ့သူခိုးတစ်ယောက်အဖြစ် နေထိုင်လာတဲ့ဂိုအယ်မွန်ဟာ သူ့ဆရာကိုလုပ်ကြံတဲ့သူရဲ့ပုံစံအစစ်အမှန်ကိုသိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ လက်စားချေဖို့ လမ်းစဉ်ကိုစတင်ပါတော့တယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက အတိုက်အခိုက်တွေကိုအတူတကွလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့လည်းပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဂိုအယ်မွန်ရဲ့ကလဲ့စားချေခြင်းခရီးမှာ အခက်အခဲတွေအများကြီးကစောင့်ကြိုနေတဲ့အခါမှာတော့ ဂိုအယ်မွန်က ဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်ဖြတ်ကျော်သွားမလဲဆိုတာအသည်းတထိတ်ထိတ်နဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါတင္ဆက္ေပးထားတဲ့ဇာတ္ကားကေတာ့ "Goemon" လို႔ေခၚတဲ့ဂ်ပန္ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဂိုအယ္မြန္ရဲ႕ဆရာ ႏိုဘူနာဂါဟာ ေနာက္လိုက္ေတြရဲ႕သစၥာေဖာက္လုပ္ႀကံခ်င္းကိုခံခဲ့ရတယ္။ ဂိုအယ္မြန္ဟာလည္း ဆရာလုပ္ႀကံခံရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာဆင္းရဲသားေတြကိုကူညီေပးေလ့ရွိတဲ့ ကြၽမ္းက်င္အဆင့္သူခိုးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ လြတ္လပ္စြာနဲ႔သူခိုးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေနထိုင္လာတဲ့ဂိုအယ္မြန္ဟာ သူ႔ဆရာကိုလုပ္ႀကံတဲ့သူရဲ႕ပုံစံအစစ္အမွန္ကိုသိသြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ လက္စားေခ်ဖို႔ လမ္းစဥ္ကိုစတင္ပါေတာ့တယ္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက အတိုက္အခိုက္ေတြကိုအတူတကြေလ့က်င့္ခဲ့တဲ့သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူနဲ႔လည္းျပန္ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဂိုအယ္မြန္ရဲ႕ကလဲ့စားေခ်ျခင္းခရီးမွာ အခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီးက​ေစာင့္ႀကိဳေနတဲ့အခါမွာေတာ့ ဂိုအယ္မြန္က ဘယ္လိုေအာင္ျမင္ေအာင္ျဖတ္ေက်ာ္သြားမလဲဆိုတာအသည္းတထိတ္ထိတ္နဲ႔စိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမွာပါ။ Review – KKK File Size – 2.2GB,1.2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Action,Drama,History Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by KKK Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142
IMDB: 6.7/10 5,390 votes
Kamui (2009) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ KAMUI:THE LONE NINJA ဆိုတဲ့ ဂျပန်နင်ဂျာကားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ခါမူအီဟာ စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုကို ရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ နင်ဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ နင်ဂျာစနစ်အရ နင်ဂျာတွေဟာ သူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်အစွမ်းတွေကို အပြင်လောက ကို သယ်ဆောင်သွားဖို့ ခွင့်ပြုခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခြားသောနင်ဂျာတွေဟာ ခါမူအီကို လိုက်လံနှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ယုံကြည်မှု၊ အချစ်ဆိုတာတွေမရှိခဲ့တဲ့ ခါမူအီဟာ မမျှော်လင့်ပဲ ငါးဖမ်းသမားတွေရဲ့ရွာကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ အခါမှာ တစ်ခြားသူများကို စတင်ယုံကြည်ချစ်ခင်လာပါတော့တယ်။ သို့သော်လည်း လိုက်လံနှောက်ယှက်သူများဟာ ခါမူအီကို အကွက်ချသတ်ရန်ကြံစည်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့..... ခါမူအီဟာ သူတို့ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲ ရောက်ရှိသွားမလား ကျော်ဖြတ်နိုင်မလားဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်..... ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္တင္ဆက္ေပးမွာကေတာ့ KAMUI:THE LONE NINJA ဆိုတဲ့ ဂ်ပန္နင္ဂ်ာကားေလးပဲ​ ​ျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ခါမူအီဟာ စစ္မွန္တဲ့လြတ္လပ္မႈကို ရွာေဖြဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ နင္ဂ်ာတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ နင္ဂ်ာစနစ္အရ နင္ဂ်ာေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္အစြမ္းေတြကို အျပင္ေလာက ကို သယ္ေဆာင္သြားဖို႔ ခြင့္ျပဳခံရ​ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အျခားေသာနင္ဂ်ာေတြဟာ ခါမူအီကို လိုက္လံေႏွာက္ယွက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ယုံၾကည္မႈ၊ အခ်စ္ဆိုတာေတြမရွိခဲ့တဲ့ ခါမူအီဟာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ငါးဖမ္းသမားေတြရဲ႕႐ြာကိုေရာက္ရွိသြားတဲ့ အခါမွာ တစ္ျခားသူမ်ားကို စတင္ယုံၾကည္ခ်စ္ခင္လာပါေတာ့တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ...
IMDB: 5.7/10 1,055 votes
The Maiden Heist (App member only) ##uniucode အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ အမေရိကန်ဇာတ်ကားမှာတော့ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်၃ယောက်ဖြစ်တဲ့ Morgan Freeman၊ Christopher Walken နဲ့ William H. Macyတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ချားစ်၊ ရော်ဂျာနဲ့ ဂျော့ဂျ်က ပြတိုက်ကလုံခြုံရေးအစောင့်တွေပါ သူတို့၃ယောက်လုံးရဲ့ တူညီတဲ့အချက်တော့ အနုပညာလက်ရာတစ်ခုစီကို ကိုယ်စီစွဲလမ်းနေတာပါပဲ ချားစ်နဲ့ရော်ဂျာက ပန်းချီကားနှစ်ချပ်ကို အလွန်နှစ်သက်နေပြီး ဂျော့ဂျ်ကတော့ ရုပ်တုကိုအင်မတန်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ် တစ်နေ့မှာတော့ ပြတိုက်ထဲက အနုပညာလက်ရာတွေကို ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကပြခန်းကိုရွှေ့ပြောင်းမယ်လို့ ပြတိုက်မှူးကကြော်ငြာခဲ့ပါတယ် နွေခေါင်ခေါင် မိုးကြိုးပစ်ခံရသလိုဖြစ်သွားတဲ့ သူတို့၃ယောက် ကြံရာမရတော့ဘဲ သူတို့ချစ်တဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကို အစစ်နဲ့အတုလဲပြီး ခိုးယူထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ် သူတို့တွေ ဒီအကြံအစည်ကို ဘယ်လိုစီစဉ်ကြမလဲ အကောင်ထည်ဖော်ကြမလဲဆိုတာ အလွဲလေးတွေရောပြီးရိုက်ပြထားလို့ ရယ်လည်းရယ်ရပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖို့လည်းကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi အခုတင္ဆက္ေပးလိုက္တဲ့ အေမရိကန္ဇာတ္ကားမွာေတာ့ နာမည္ႀကီးသ႐ုပ္ေဆာင္၃ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Morgan Freeman၊ Christopher Walken နဲ႔ William H. Macyတို႔ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ခ်ားစ္၊ ေရာ္ဂ်ာနဲ႔ ေဂ်ာ့ဂ်္က ျပတိုက္ကလုံၿခဳံေရးအေစာင့္ေတြပါ သူတို႔၃ေယာက္လုံးရဲ႕ တူညီတဲ့အခ်က္ေတာ့ အႏုပညာလက္ရာတစ္ခုစီကို ကိုယ္စီစြဲလမ္းေနတာပါပဲ ခ်ားစ္နဲ႔ေရာ္ဂ်ာက ပန္းခ်ီကားႏွစ္ခ်ပ္ကို အလြန္ႏွစ္သက္ေနၿပီး ေဂ်ာ့ဂ်္ကေတာ့ ...
IMDB: 6.1/10 16,165 votes
Running Turtle (2009) ##unicode Running Turtle ဒီကားလေးက 2009မှာထွက်ရှိထားပြီး Box office ကရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Hospital playlist ထဲကမင်းသား Jung Kyoung Ho အပြင် မင်းသားKum Yun Seok နဲ့အခြားသရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Conedy,Crime,Action ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဖီဆောင်းကစုံထောက်ဖြစ်ပြီး ဆောင်းဂီထယ်က ခိုးမှုနဲ့ဝရမ်းပြေးတစ်ယောက်ပါ စုံထောက်ဖီဆောင်းက တစ်နေ့ကိစ္စတစ်ခုကြောင့်တာဝန်ရပ်ဆိုင်းခံလိုက်ရပါတော့တယ် ပိုက်ဆံလိုတာကြောင့် လောင်းကစားလုပ်ရင်း နိုင်သွားတဲ့အခါ အဲ့ပိုက်ဆံတွေကို ဝရမ်းပြေးဂီထယ်က ခိုးသွားပါတော့တယ် ဂီထယ်က ရဲတွေဘယ်လိုဖမ်းလို့မရတဲ့ လူတော်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့တာကြောင့် ဖီဆောင်းက ဂီထယ်ကိုဖမ်းဖို့နည်းလမ်းမျိုးစုံလုပ်ပါတော့တယ် ကိုရီးယားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း စုံထောက်ဟာသကားလေးမို့ အခုလိုအချိန်မှာစိတ်အပန်းပြေအောင် ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ##zawgyi Running Turtle ဒီကားေလးက 2009မွာထြက္႐ွိထားၿပီး Box office ကရိုက္ကူးထားပါတယ္။ Hospital playlist ထဲကမင္းသား Jung Kyoung Ho အျပင္ မင္းသားKum Yun Seok နဲ႔အျခားသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားစြာပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားျပီး Conedy,Crime,Action ဇာတ္ကားျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ဖီေဆာင္းကစံုေထာက္ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္းဂီထယ္က ခိုးမႈနဲ႔ဝရမ္းေျပးတစ္ေယာက္ပါ စံုေထာက္ဖီေဆာင္းက တစ္ေန႔ကိစၥတစ္ခုေၾကာင့္တာဝန္ရပ္ဆိုင္းခံလိုက္ရပါေတာ့တယ္ ပိုက္ဆံလိုတာေၾကာင့္ ေလာင္းကစားလုပ္ရင္း ႏိုင္သြားတဲ့အခါ အဲ့ပိုက္ဆံေတြကို ဝရမ္းေျပးဂီထယ္က ခိုးသြားပါေတာ့တယ္ ဂီထယ္က ...
IMDB: 5.8/10 129,826 votes
Anaconda4: Trail of Blood (2009) ##unicode ဒီဇာတ်ကားက Anaconda3မှာ ဖမ်းမိခဲ့တဲ့ anaconda ပေါက်စလေးကို ပီတာဆိုတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်က blood orchid ကနေထုတ်ထားတဲ့ serum နဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ သုတေသန ပြုလုပ်ချက်တွေအတိုင်း မြွေက နဂိုအရွယ်အစားထက် ငါးဆလောက်ကြီးမားလာတာကို သတိပြုမိတယ် အနာဒဏ်ရာရရင်လည်းပဲ ချက်ချင်းကို အသားပြန်တက်လာတယ် ဒါပေမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ မြွေက အကောင်ကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက် အချိန်ပြည့် ဗိုက်ဆာနေတာတို့ မစားရရင် ရန်မူချင်တာတို့ ဖြစ်လေ့ရှိတယ် ဒါကြောင့် စိတ်ငြိမ်ဆေးကို ထိုးထားပေးရပါတယ် တစ်နေ့မှာ ပီတာက ပန်းစိုက်ခင်းထဲသွားနေတဲ့အချိန် မြွေကို ပိတ်လှောင်ထားတဲ့ သံတံခါးကပြုတ်ထွက်ပြီး သူ့ကို ဝါးစားလိုက်ရော အဲ့ဒါကြောင့် သူနဲ့ သဘောတူညီမှု လုပ်ထားတဲ့သူက အဆက်အသွယ်ပျက်သွားတာကြောင့် ကြေးစားလူသတ်သမားတွေ ငှားပြီး ပီတာဟာ စမ်းသပ်တာအောင်မြင်လို့ ထွက်ပြေးသွားတယ်ထင်ပြီး ပီတာကို ရှာပြီး သူရဲ့ ဆေးနမူနာ နဲ့ အချက်အလက်တွေ ပန်းတွေအကုန်လုံးကို ရှာခိုင်းခဲ့တယ် အဲဒီတော့ serum က ပီတာနဲ့ သဘောတူညီမှုလုပ်ထားတဲ့သူဆီကို ရောက်သွားမလား သူစမ်းသပ်နေတဲ့ မြွေနဲ့ ဘယ်လိုတွေ ...
IMDB: 3.0/10 4,621 votes
Anaconda4: Trail of Blood (2009)
Sorority Row (2009) ##unicode ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း Theta Pi Sorority ကျောင်းမှာတက်နေကြတဲ့ အယ်လီ ဂျက်စီကာ ကလယ်ရီ မက်ဂန် ချက်စ်နဲ့ ကတ်စီဒီတို့ ခြောက်ယောက်ဟာအရမ်းကို ခင်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေပါ တစ်ရက်မှာတော့သူတို့တွေဟာ ပါတီတက်ရင်း မက်ဂန်က သူ့သူငယ်ချင်းချက်စ်ရဲ့မောင်ဖြစ်သူ ဂရက်နဲ့အတူတူနေရင်း အဆိပ်သင့်သလိုဖြစ်ပြီးအသက်ရှူရပ်သွားပါတယ် တကယ်တော့အဲ့တာဟာ မက်ဂန်တို့သူငယ်ချင်းတစ်စု နောက်ပြောင်ပြီးသေချင်ယောင်ဆောင်ကာ သူ့ကိုလိမ်သွားတဲ့ဂရက်ကိုပညာပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ စစချင်းမှာနောက်ပြောင်တာကို ပျော်နေခဲ့ပေမယ့် ဂရက်ဟာအကြောက်လွန်ပြီး မက်ဂန်ကိုတကယ်သတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ ပြဿနာအကြီးကြီးတွေ့ရပါတော့တယ် နောက်ဆုံးမှာ သူတို့အားလုံးဟာ မက်ဂန်ရဲ့အလောင်းကိုရေတွင်းထဲချ လက်စဖျောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ် ဒီလိုနဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်ပြီထင်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့မှာတစ်စုံတစ်ယောက်က လိုက်လံသတ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာတော့လူသတ်သမားကဘယ်သူလဲ သူတို့သူငယ်ချင်းတစ်စုကောလွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ခံစားရမဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်လို့ကြည့်ရှုကြပါဦး ##zawgyi ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း Theta Pi Sorority ေက်ာင္းမွာတက္ေနၾကတဲ့ အယ္လီ ဂ်က္စီကာ ကလယ္ရီ မက္ဂန္ ခ်က္စ္နဲ႔ ကတ္စီဒီတို႔ ေျခာက္ေယာက္ဟာအရမ္းကို ခင္ၾကတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြပါ တစ္ရက္မွာေတာ့သူတို႔ေတြဟာ ပါတီတက္ရင္း မက္ဂန္က သူ႔သူငယ္ခ်င္းခ်က္စ္ရဲ႕ေမာင္ျဖစ္သူ ဂရက္နဲ႔အတူတူေနရင္း အဆိပ္သင့္သလိုျဖစ္ၿပီးအသက္ရႉရပ္သြားပါတယ္ တကယ္ေတာ့အဲ့တာဟာ မက္ဂန္တို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ေနာက္ေျပာင္ၿပီးေသခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ သူ႔ကိုလိမ္သြားတဲ့ဂရက္ကိုပညာေပးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ စစခ်င္းမွာေနာက္ေျပာင္တာကို ေပ်ာ္ေနခဲ့ေပမယ့္ ဂရက္ဟာအေၾကာက္လြန္ၿပီး မက္ဂန္ကိုတကယ္သတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ သူတို႔သူငယ္ခ်င္းေတြ ျပႆနာအႀကီးႀကီးေတြ႕ရပါေတာ့တယ္ ေနာက္ဆုံးမွာ သူတို႔အားလုံးဟာ မက္ဂန္ရဲ႕အေလာင္းကိုေရတြင္းထဲခ် လက္စေဖ်ာက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါေတာ့တယ္ ဒီလိုနဲ႔ျပႆနာေတြေျပလည္ၿပီထင္ခဲ့ေပမယ့္သူတို႔ရဲ႕ဘြဲ႕ယူတဲ့ေန႔မွာတစ္စုံတစ္ေယာက္က လိုက္လံသတ္ျဖတ္တဲ့အခါမွာေတာ့လူသတ္သမားကဘယ္သူလဲ သူတို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စုေကာလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကို ရင္တထိိတ္ထိတ္နဲ႔ခံစားရမဲ့ဇာတ္ကားေလးျဖစ္လို႔ၾကည့္ရႈၾကပါဦး Review – Phyu Sin File Size – 1GB Format…mp4 Quality : 1080p WEBrip Duration…1h 41min Genre : Horror, Mystery Subtitle : Myanmar ...
IMDB: 5.1/10 28,387 votes
Cloudy withaChance of Meatballs (2009) ##unicode Cloudy With A Chance Of Meatballs 2009ဇာတ်ကားလေးမှာတော့ Flintဆိုတဲ့ကောင်လေးက ငယ်ငယ်ကတည်း သိပ္ပံတီထွင်မှုတွေကို စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်။ သူက လူတွေကိုကူညီပေးတဲ့ တီထွင်မှုတွေလုပ်ချင်ပေမဲ့ သူတီထွင်သမျှပစ္စည်းတွေက ပေါက်ကရတွေဖြစ်သွားတာကြောင့် လူတွေရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းကိုဘဲ အမြဲခံနေရတဲ့သူပါ။ တစ်နေ့မှာ ငါးသေတ္တာတွေဘဲစားနေရတဲ့ သူတို့မြို့လေးအတွက်ရေကနေ အစားအစာတွေပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ စက်ကို တီထွင်ဖို့အကြံရခဲ့ပါတယ်။အဲ့စက်ကို အိမ်မှာစမ်းသပ်နေရင်း ပါဝါကျသွားတာကြောင့် မြို့ရဲ့လျှပ်စစ်ပါဝါတိုင်ကိုသွားပြီး စမ်းသပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာ မြို့တော်ဝန်က ပွဲလုပ်နေပြီးတော့ တစ်ခြားမြို့က မိုးလေဝသကြေညာသူအလုပ်သင် ကောင်မလေး Samလဲရောက်နေခဲ့ပါတယ်။ ပြသာတွေဘဲရှာတတ်သူ Flintတစ်ယောက် သူ့စက်ကို စမ်းသပ်တာအောင်မြင်ပြီး မြို့ကိုကယ်တင်နိုင်မလား မြို့တော်ဝန် လုပ်နေတဲ့ပွဲကို ဖျက်ဆီးမိမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမဲ့ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi Cloudy With A Chance Of Meatballs 2009ဇာတ္ကားေလးမွာေတာ့ Flintဆိုတဲ့ေကာင္ေလးက ငယ္ငယ္ကတည္း သိပၸံတီထြင္မႈေတြကို စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္တယ္။ သူက လူေတြကိုကူညီေပးတဲ့ တီထြင္မႈေတြလုပ္ခ်င္ေပမဲ့ သူတီထြင္သမွ်ပစၥည္းေတြက ​ေပါက္ကရေတြျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ လူေတြရဲ႕အျပစ္တင္ျခင္းကိုဘဲ အၿမဲခံေနရတဲ့သူပါ။ တစ္ေန႔မွာ ငါးေသတၱာေတြဘဲစားေနရတဲ့ သူတို႔ၿမိဳ႕ေလးအတြက္ေရကေန အစားအစာေတြေျပာင္းေပးႏိုင္တဲ့ စက္ကို တီထြင္ဖို႔အႀကံရခဲ့ပါတယ္။အဲ့စက္ကို အိမ္မွာစမ္းသပ္ေနရင္း ပါဝါက်သြားတာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ရဲ႕လွ်ပ္စစ္ပါဝါတိုင္ကိုသြားၿပီး စမ္းသပ္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။အဲ့အခ်ိန္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ပြဲလုပ္ေနၿပီးေတာ့ တစ္ျခားၿမိဳ႕က မိုးေလဝသေၾကညာသူအလုပ္သင္ ...
IMDB: 6.9/10 201,505 votes
My Bloody Valentine My Bloody Valentine (2009) ===================== ဟောလိုးဝင်းနဲ့လိုက်မယ့် အတော်အသင့် ခြောက်ခြားစရာ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို ရွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် My Bloody Valentineက မဆိုးတဲ့ကားပါပဲ။ SuperNaturalရဲ့ Dean Winchester , Jesen Ackelesရဲ့ Box Officeမှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်။ SuperNatural အစောပိုင်းကာလနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်အရသာလိုချင်တဲ့ Dean ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အကြိုက်တွေ့မယ့် ကားမျိုးလည်းဟုတ်တယ်။ တစ်ခုရှိတာက ဒီရုပ်ရှင်က Slasher filmပါ။ ပြောရရင်တော့ ‌‌ချွန်ထက်တဲ့လက်နက်တွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဟက်တက်ခွဲ လူသတ်‌တာတွေပြတဲ့ Horror Filmတစ်မျိူးပါပဲ။ အရမ်းကြီးတော့ ကြောက်ဖို့မကောင်းလှပါဘူး။ ခေါင်းကို ကိတ်မုန့်ခွဲသလို ပါးစပ်ကနေ ဂေါ်ပြားထိုးစိုက်ပြီး လှီးပစ်တာလောက်ပဲပါပါတယ်။ အားနည်းချက်ကတော့ တရားခံကိုထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်အောင် ပတ်ပြပြီး Plot twistလေး ထည့်ထားပေမယ့် ဇာတ်ကြောင်းအရ တရားခံကသိသာလွန်းနေတာပါပဲ။ တရားခံကို ဖုံးဖို့ အားစိုက်မကြိုးစားဘဲ ဒီအတိုင်းရေလိုက်ငါးလိုက်လေး ထားလိုက်ရင် ဒီကားရဲ့ Ratingက ဒီထက်ပိုကောင်းသွားမှာပါ။ Box officeမှာ အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ အများစုတော့ ကြိုက်ကြပုံပါပဲ။ Jesen ...
IMDB: 5.4/10 53,128 votes
City of Life and Death City Of Life and Death (2009) ================= IMDb – 7.7/10 Rotten Tomatoes – 92 % Cast : Ye Liu – Lu Jianxiong Gao Yuanyuan – Miss Jiang Hideo Nakaizumi – Kadokawa Ryu Kohata – Ida ဒီကားဟာဆုိရင္ ဟိုးအရင္ေခတ္ စစ္ပြဲအေၾကာင္းကို ျဖဴမဲ ပံုစံနဲ႔ရုိက္ျပထားတဲ့ ဇာတ္ကားပါ Rating ေတြလည္းအရမ္းေကာင္းခဲ့ျပီး ၾကည့္ရွဴသူအရမ္းမ်ားခဲ့ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းဟာဆိုရင္ ဒုတိယတရုတ္-ဂ်ပန္စစ္ပြဲအတြင္း ၁၉၃၇ မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲအေၾကာင္းကို အေျခခံရိုက္ကူးထားတာပါ ဂ်ပန္္အင္ပါယာဟာ တစ္ေခတ္တစ္ခါက တရုတ္ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ နန္႔က်င္းျမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္ အဲ့ဒါကိုု ” နန္႔က်င္း သတ္ျဖတ္မွဳ႕ ” လို႕ေခၚၾကျပီး အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ တရုတ္စစ္သံု႔ပန္းေတြနဲ႔ ျမိဳု႕သူျမိဳ႕သားေတြကို ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကလို႔ပါ ဤ႐ုပ္ရွင္သည္တ႐ုတ္စစ္သား၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဂ်ပန္စစ္သား၊ ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳႏွင့္နာဇီစီးပြားေရးသမားဂြၽန္ရာဘီ (တရုတ္ျမိဳ႕သားေတြကုိကူညီသူ)အပါအ၀င္ ...
IMDB: 7.7/10 10,230 votes
IMDB: 7.2/10 11,179 votes
4th Period Mystery ဒီဇာတ္ကားမွာ Memorist/My Strange Hero/I’m notaRobot ဇာမ္လမ္းေတြက မင္းသား Yoo Seung-Ho က အဓိက ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ၪ္း ဟန္ေဂ်ာင္ဟြန္းဟာ ေက်ာင္းရဲ႕ အထူးခြၽန္ဆုံး နံပါတ္ ၁ ေက်ာင္းသားပါ သူတို႔အတန္းထဲမွာ ဆံပင္ရွည္အလယ္ခြဲကို မ်က္ႏွာမွာ လိုက္ကာလိုကာထားတဲ့ ေက်ာင္းသူ လီဒါေဂ်ာင္းလည္းရွိပါတယ္ ဒါေဂ်ာင္းကေတာ့ မႈခင္း၀တၳဳေတြႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီးအၿမဲတမ္းဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္ တစ္ရက္မွာ အတန္းထဲက ထယ္အင္ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ပါးစပ္ကေသြးေတြအန္ရင္းေမ့လဲသြားျပီး ေဆး႐ုံေရာက္ေတာ့စစ္ေဆးၾကည့္တဲ့အခါ သူေသာက္လိုက္တဲ့ အေအးထဲမွာ အဆိပ္ခတ္ထားတယ္လို႔ သိလိုက္ရပါတယ္ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ဂင္ထယ္ဂယူဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသား အတန္းထဲမွာသတ္ခံလိုက္ရတဲ့ေနာက္ အဲ့အခါမွာ နံပါတ္ ၁ သံသယရွိသူ ဟန္ေဂ်ာင္ဟြန္းျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္ တရားခံက ဘယ္သူျဖစ္မလဲ ဘယ္သူက ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္တာလဲ ေနာက္ဆုံးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မလားဆိုတာ ဒီဇာတ္ကားမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈၾကပါေနာ္…။
Kaiji: The Ultimate Gambler (2009) ဒီဇာတ်ကားကို ငယ်တုန်းက မကြည့်ဖူးတဲ့ရှားမယ်ထင်ပါတယ် ဂျပန်ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Death Note ထဲက မင်းသားနှစ်လက် ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းပါ. imdb 6.5 အထိရထားတဲ့ ဒီကားလေးရဲ့ အညွန်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Kaiji ဆိုတဲ့ ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပိုက်ဆံချေးတာကို အာမခံပေးလိုက်မိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းက အကြွေးမပေးပဲ ရှောင်သွားတဲ့ Kaiji တစ်ယောက်ဆီပြသာနာကရောက်လို့လာပါတော့တယ်. ချေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံအပြင် အတိုးတွေက များပြားလို့ ပြန်ဆပ်ဖို့ ခက်ခဲလာတဲ့ အခါ လောင်းကစား သင်္ဘောပေါ်ကနေ အလောင်းအစားတွေပြုလုပ်ပီးလွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားရက. ပိုမိုခက်ခဲလာခဲ့ပီးနောက်ဆုံး အသက်နဲ့လောင်းကစားပြုရတဲ့ အထိဖြစ်လာခဲ့တယ်
IMDB: 6.5/10 1,175 votes
Ghosts of Girlfriends Past (2009) ##unicode > "သမီးရည်းစားဆက်ဆံရေးတစ်ခုရဲ့အင်အားက ဂရုမစိုက်တဲ့လူဆီမှာဘဲရှိတာ" >> "မင်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရင် မင်းသူမကိုလည်ပင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းစကားနှစ်ခုလောက်ပြောလိုက် သူမကိုနှုတ်ခမ်းလှတယ် မျက်လုံးလှတယ် ဆံပင်ကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက် သူမကိုဉာဏ်ကောင်းတယ် သူမကိုစိတ်ထားကောင်းတယ် မင်းစိတ်ထဲရှိတာကိုသာပြောလိုက် ဒါဆိုသူမက မင်းကိုတစ်ခုခုဘဲလို့စပြီးတွေးတော့မယ်" >> "မင်းသိလား မင်းအချစ်ကြောင်းစဉ်းစားမိရင် အဲ့အချိန်မှာမင်းချက်ချင်းကိုထပြီးတော့ လမ်းလဲမလျှောက်နဲ့ ဖိနပ်လဲမစီးနဲ့တော့ အဲ့ကနေသာချက်ချင်းပြေးထွက်ခဲ့တော့ ဘာလို့ဆို‌တော့သဘက်ခါ ဒါမှမဟုတ် နောက်အပတ်ကျရင် ဒါမှမဟုတ် အနာဂတ်တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် မင်းထပ်ပြီးတော့နာကျင်ရအုံးမှာမို့လို့ပဲ" ဒါကတော့ ဇာတ်ကားထဲက မင်းသားရဲ့လက်ဦးဆရာ Uncle Wayne ရဲ့တော်ကီတွေပါ ဘာမှမသိသေးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို စော်ကြည်နည်းစသင်ပေးတုန်း ကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း Cornor Mead က နာမည်ကြီးဓာတ်ပုံဆရာလူရှုပ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သူဟာမိန်းကလေးတိုင်းနဲ့အတည်မတွဲဘဲလိင်ဆက်ဆံဖို့ကိုသာအာရုံထားပြီး အချစ်ကိုမယုံကြည်သူတစ်ယောက်လဲဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့မှာသူ့ညီလေး Paulတစ်ယောက်ကသေ သွားတဲ့သူ့ဦးလေးလူရှုပ်Wayneအိမ်မှာမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုဖိတ်လာခဲ့ပါတယ်။ အချစ်ကိုမယုံတဲ့Cornorတစ်ယောက်သူ့ညီမင်္ဂလာဆောင်ကိုတားဖို့အတွက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ အဲ့အိမ်မှာသူ့အချစ်ဦးကောင်မလေးDr. Jennyနဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အိမ်မှာမင်္ဂလာဆောင်ကိုတားဖို့ကြိုးစားနေတုန်းမှာCornorကိုသေသွားပြီဖြစ်တဲ့ Uncle Wayneကသရဲအနေနဲ့သတိလာပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘဝကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်ဒီညမှာသူ့ဆီကိုအတိတ် လက်ရှိ အနာဂတ်က ရည်းစားတွေကသရဲအဖြစ်သူ့ဆီရောက်လာမဲ့အကြောင်းကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ညမှာCornorဆီသရဲရည်းစားကောင်မလေးတွေရောက်လာပြီးဘာတွေဖြစ်မလဲ။ Cornorဘဝရောဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲ။ သူ့အချစ်ဦးJennyနဲ့ရောဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမဲ့ကားလေးပါ။ ##zawgyi >> "သမီးရည္းစားဆက္ဆံေရးတစ္ခုရဲ႕အင္အားက ဂ႐ုမစိုက္တဲ့လူဆီမွာဘဲရွိတာ" >> "မင္းမိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ပထမဆုံးေတြ႕ရင္ မင္းသူမကိုလည္ပင္းအထက္ပိုင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ခ်ီးမြမ္းစကားႏွစ္ခုေလာက္ေျပာလိုက္ သူမကိုႏႈတ္ခမ္းလွတယ္ မ်က္လုံးလွတယ္ ဆံပင္ေကာင္းတယ္လို႔ေျပာလိုက္ သူမကိုဉာဏ္ေကာင္းတယ္ သူမကိုစိတ္ထားေကာင္းတယ္ မင္းစိတ္ထဲရွိတာကိုသာေျပာလိုက္ ဒါဆိုသူမက မင္းကိုတစ္ခုခုဘဲလို႔စၿပီးေတြးေတာ့မယ္" >> "မင္းသိလား မင္းအခ်စ္ေၾကာင္းစဥ္းစားမိရင္ အဲ့အခ်ိန္မွာမင္းခ်က္ခ်င္းကိုထၿပီးေတာ့ လမ္းလဲမေလွ်ာက္နဲ႔ ဖိနပ္လဲမစီးနဲ႔ေတာ့ အဲ့ကေနသာခ်က္ခ်င္းေျပးထြက္ခဲ့ေတာ့ ဘာလို႔ဆို‌ေတာ့သဘက္ခါ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္အပတ္က်ရင္ ဒါမွမဟုတ္ အနာဂတ္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္က်ရင္ မင္းထပ္ၿပီးေတာ့နာက်င္ရအုံးမွာမို႔လို႔ပဲ" ဒါကေတာ့ ဇာတ္ကားထဲက မင္းသားရဲ႕လက္ဦးဆရာ Uncle Wayne ရဲ႕ေတာ္ကီေတြပါ ဘာမွမသိေသးတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကို ေစာ္ႀကည္နည္းစသင္ေပးတုန္း ကေျပာခဲ့တဲ့စကားေတြပါ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း Cornor ...
IMDB: 5.8/10 82,514 votes
Mulan: Rise ofaWarrior (2009) တရုတ်အမျိုးသမီးသူရဲကောင်းတစ်ယောက်အကြောင်းကိုအခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ မူလန်ဇာတ်ကားဟာ 1998 ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ Walt Disney က Mulan Animation ဇာတ်ကားနဲ့မတူတဲ့ဖန်တီးချက်တွေနဲ့ တင်ဆက်ထားတာပါ။… နေမကောင်းတဲ့နေတဲ့ဖခင်ရဲ့ကိုယ်စားအတွက် သမီးဖြစ်သူဟွားမူလန်က စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ယောကျာၤးလေးအယောင်ဆောင်ပြီးစစ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ရပါတယ်… ကိုယ်ခံအားကောင်းပြီး တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ရှိတဲ့ မူလန်ဟာတပ်ကိုဦးဆောင်နိုင်ရုံမကပဲ တရုတ်သမိုင်းတစ်လျောက်မှာအကျော်ကြားဆုံး မိန်းကလေးစစ်သူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်… တိုက်ပွဲတိုင်းမှာအောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပင်ကိုယ်အခံကမိန်းကလေးဖြစ်နေသောကြောင့် သနားကြင်နာတတ်တဲ့စိတ်နဲ့အကြောက်တရားဟာ သူမအတွက်အားနည်းချက်တစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်… တစ်ခုသောတိုက်ပွဲမှာသူမအားထားရတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါ သူမအတွက်အကြီးမားဆုံးထိုးနှက်ချက်တစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့ရပါတော့တယ်… ဒီကားရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင် မူလန်နေရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Zhao Wei ကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်… ဒီဇာတ်ကားနဲ့ မင်းသမီး Zhao Wei ဟာ 10th Changchun Film Festival : Actress Award 300th Hundred Flowers Award : Best Picture Award & Best Actress Award 19th Shanghai Film Critics Award : Best Actress Award Vietnam DAN Movie Awards : Favorite Actress Award စတဲ့ဆုတို့ကို ...
IMDB: 6.8/10 5,403 votes
Fighting (2009) ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ေဘာက္ဆင္အားကစားကားေလးတစ္ကားနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္..ဒီကားမွာ ဘာမင္ဟန္နယ္သားေရွာမစ္ကြန္းဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးဟာ ငယ္ငယ္က တည္းက ေဘာက္ဆင္ပညာ တတ္ထားတယ္..ဒါေပမယ့္ လက္ရွိမွာေတာ့ နယူးေယာက္ခ္ မွာ စာအုပ္ေလးေတြေရာင္းၿပီး အသက္ေမြးေနတာေပါ့..အဲ့လိုနဲ႔ တစ္ေန႔မွာ သူစာအုပ္ေရာင္းတဲ့ေနရာနားမွာ ပြဲလတ္မွတ္ေတြေရာင္းတဲ့ေကာင္ေလးေတြနဲ႔ ၿငိၿပီး ရန္ျဖစ္ၾကေရာ..အဲ့ဒီမွာ ပြဲလတ္မွတ္ေရာင္းတဲ့ေကာင္ေတြရဲ႕ဆရာ ဟာေဗးက သူ႔ရဲ႕ ေဘာက္ဆင္စြမ္းရည္ကိုႀကိဳက္သြားတယ္..အဲ့တာနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေရွာနဲ႔ဟာေဗးနဲ႔လက္တြဲၿပီး ေၾကးပြဲေတြလိုက္ထိုးတာေပါ့.. ေနာက္ေတာ့ ေရွာနဲ႔ ငယ္ငယ္က ရန္စရွိခဲ့ဖူးတဲ့အယ္လ္ဗင္ဟာေလ ဆိုတဲ့ ေကာင္နဲ႔ ထိုးရဖို႔ အေၾကာင္းဖန္လာတယ္..အယ္လ္ဗင္ဟာေလဆိုတဲ့ေကာင္ကိုလည္း ေရွာရဲ႕အေဖကပဲ ေဘာက္ဆင္ပညာသင္ေပးခဲ့တာ...ဆရာတစ္ေယာက္တည္းကေန ပညာတူတူရခဲ့တဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ဘယ္လိုေတြေသေသေၾကေၾကထိုးၾကမလဲ..ဟာေဗးကေကာ ေလာင္းေၾကးေတြႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လိုအကြက္ေတြသုံးမလဲဆိုတာ..ဒီေဘာက္ဆင္ကားေလးမွာအေျဖရွာၾကည့္ရေအာင္.. ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဘောက်ဆင်အားကစားကားလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်..ဒီကားမှာ ဘာမင်ဟန်နယ်သားရှောမစ်ကွန်းဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ ငယ်ငယ်က တည်းက ဘောက်ဆင်ပညာ တတ်ထားတယ်..ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ နယူးယောက်ခ် မှာ စာအုပ်လေးတွေရောင်းပြီး အသက်မွေးနေတာပေါ့..အဲ့လိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ သူစာအုပ်ရောင်းတဲ့နေရာနားမှာ ပွဲလတ်မှတ်တွေရောင်းတဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့ ငြိပြီး ရန်ဖြစ်ကြရော..အဲ့ဒီမှာ ပွဲလတ်မှတ်ရောင်းတဲ့ကောင်တွေရဲ့ဆရာ ဟာဗေးက သူ့ရဲ့ ဘောက်ဆင်စွမ်းရည်ကိုကြိုက်သွားတယ်..အဲ့တာနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ရှောနဲ့ဟာဗေးနဲ့လက်တွဲပြီး ကြေးပွဲတွေလိုက်ထိုးတာပေါ့.. နောက်တော့ ...
IMDB: 5.6/10 31,474 votes
Satyameva Jeyathe (2009) IMDb 5.5/10 ဘဝကို ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ အသက်မွေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ဦးဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အာဏာပိုင်အချို့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုတွေကို သိရှိသွားတဲ့နောက် . . . အာဏာပိုင်‌တွေနဲ့ရပ်တပ်ဖွဲ့တွေက သူ့ကို အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်စွပ်စွဲဖမ်းဆီးဖို့ကြံစည်ပါတော့တယ်။ ဖမ်းဆီးဖို့‌စေခိုင်းလိုက်တဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့ အရေးပိုင်မင်းတစ်ဦးပါဝင်နေတဲ့အတွက် အရေးပိုင်မင်းနဲ့သူ့တပ်ဖွဲ့တွေက အမှန်တရားကို‌ဘယ်လိုပါးနပ်လိမ္မာစွာဖော်ထုတ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို . . . ‌ရင်ခုန်စွာကြည့်ရှုရမယ့် အက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
Satyameva Jeyathe (2009)
IMDB: 6.5/10 67,296 votes
Born of Hope (2009) Born of Hope (2009) ================ IMDb Rating – 6.2/10 #Unicode J.R.R Tolkien ရဲ့ Lord of the Rings Triology တွေနဲ့ ဆက်‌​နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ LOTR ထဲမှာပါတဲ့ Isildur ရဲ့ အမွေဆက်ခံသူ ၊ Gondor ရဲ့ ဘုရင် ၊မြောက်ပိုင်းစစ်သည်တော် အာရာဂွန် (Aragorn )ရဲ့ ငယ်ဘ၀ကို ရိုက်ကူးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အာရာဂွန်ဟာ အာရာသွန်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ ဖခင် အာရာသွန်နဲ့ Orcs တွေကြားက ပဍိပက္ခ တွေကို အဓိကထားပြထားပြီး သူတို့ရဲ့ နယ်မြေ Gondor ကိုပြန်‌လည်တည်ထောင်ဖို့အတွက် အာရာဂွန်ဆိုတဲ့ စစ်သည်တစ်ယောက် ဘယ်လိုမွေးဖွားခဲ့ ရှင်သန်ခဲ့လဲဆိုတာ သိရမှာပါ ။ LOTR fan တိုင်း လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ prequel တစ်ခုလို့ အကြံပေးပါရစေ။ (ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ Thiha Yan Naing ပဲဖြစ်ပါတယ်။) #Zawgyi J.R.R Tolkien ...
IMDB: 6.2/10 2,106 votes